जसले भारतीय च्यानलहरु प्रसारण बन्द गरेर नेपालीहरुलाई खुशी दिए ! [ सम्मान स्वरुप एक शेयर गरौँ ] – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/जसले भारतीय च्यानलहरु प्रसारण बन्द गरेर नेपालीहरुलाई खुशी दिए ! [ सम्मान स्वरुप एक शेयर गरौँ ]
काठमाडौं। केवुल अपरेटरहरुले नेपालमा भारतीय न्यूज च्यानल प्रशारण बन्द गरेका छन्। नेपालमा विदेशी च्यानल वितरण गर्दै आएका मल्टी सिस्टम अपरेटरहरुले दुरदर्शन बाहेकका भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण नगर्ने भएका हुन्। यो खबर नागरिकमा छ।
मेगा म्याक्स टिभीका उपाध्यक्ष ध्रुव शर्माका अनुसार अपरेटरहरुले यस्तो निर्णय गरेको बताए। भारतीय च्यानहरुले पछिल्लो समय पत्रकारिताको सामान्य इथिक्स पनि नराखि नेपालका बारेमा विभिन्न अ’नर्गल प्रचार गर्दै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीलाई जोडेर कपोकल्पित समाचार समेत प्रशारण गरिरहेका छन्। उनीहरुका समाचारबारे सामाजिक संजालमा चर्को आ’लोचना भइरहेको छ। भारतीय न्यूज च्यानले पत्रकारिताको सामान्य मर्मसमेत नसामाति नेपाल र नेपालीमाथि प्र’हा’र गरेकोले अपरेटरहरुको सल्लाहमा च्यानल बन्द गरिएको शर्माले बताए।
इन्टरनेटबार हुने प्रशारणलाई रोक्नको लागि नीति ल्याउनु पर्ने उनले बताए। ‘हामीले च्यानल बन्द गरेर मात्र हुँदैन। अहिले इन्टरनेटबाट समेत प्रशारण हुन्छ। त्यसबाट अफ’वाह फैलिन्छ। यसको लागि सरकारले नीति ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने।
यसैगरि नारायण गाउँले लेख्नुहुन्छ:
हार्दिक आभार Dhurba Sharma जी । नेपाल सरकारले कूटनैतिक च्यानलबाट भारतीय सञ्चार माध्यमलाई ग’ल्ती सच्याउन र माफी माग्न लगाउनुपर्थ्यो, त्यस्तो हुन सकेन । तर आफ्नै पहलमा भए पनि तपाईं च्यानल वितरकहरुले दूरदर्शनबाहेकका भारतीय समाचार च्यानल प्रसारण नगर्ने निर्णय गर्नुभो, त्यसले धेरै नेपालीलाई खुशी दिएको छ ।
कुनै पनि सञ्चार सेवाको प्रसारणमा बन्देज लगाइनु लोकतान्त्रिक आचरण होइन तर यतिबेला परिस्थिति बेग्लै छ । ती सञ्चार संस्था होइन, घृणाको खेती गर्ने माध्यम बनेका छन् । तपाईंहरुले बन्देज भन्दा पनि प्रसारण नगर्ने निर्णय गर्नुभएको होला । दूरदर्शनलाई खुला राखेर तपाईंहरुले दूरदर्शी निर्णय गर्नुभएको छ । यसले सञ्चार र संवाद टुट्नबाट जोगाउनेछ ।
नेपालमा फैलिन सक्ने घृ’णा र ग’लत सूचना त तपाईंहरूको निर्णयले रोकिएको छ तर भारत र विश्वभर यस्तो आपराधिक प्रकृतिको वि’तण्डा रोक्न सरकारले नै थप केही गर्नु जरूरी छ । हाम्रो आ’पत्ति च्यानलसँग होइन, कन्टेन्टसँग हो । आशा गरौँ, कन्टेन्टहरू सच्च्याइनेछन् र परिस्थिति पूर्ववत् हुनेछ । तपाईंको म्याक्स टिभीलगायत सम्पूर्ण प्रसारकको जय होस् !
यी हुन् नेपाल टेलिकमको नम्बरमा फोन गर्दा कोरोना सम्ब`न्धि सूचना दिने महिला, हेर्नुहोस्।!
यी फिल्म, जसले कोरोना भाइरसजस्तै संक्रमणको कथा भन्छन् !
न्यूरोडको एक क्यामेरा पसलमाबाट जव १० लाख रुपैया लुटेर हिड्ने प्रहरी !!!
भक्तपुर घट`नाले लियो डर`ला`ग्दो रुप आफन्तनै संकाको घेरामा, मृत`कको बुवा रुदै मिडियामा प्रहरीमा जाहेरी